Dowlada Federaalka oo meel dhexe ka istaagtey khilaafka u dhexeeya dowlada Kanliijka
DF oo meel dhexe ka istaagtey khilaafka u dhexeeya dowladaha Khaliijka [AKHRI]
MUQDISHU, Somalia- Qoraal deg deg ah oo kasoo baxay madaxtooyada dowlada Fedraalka Somalia ayaa lagu sheegey in Villa Somalia ka xun tahay khilaafka soo kala dhexgaley wadamada Carabta.
Qoraalkaan ayaa lagu sheegey in xalka khilaafka dhexmarey wadamada Khlaiijka lagu dhameeyo wadahadal kaasoo loo marayo wadamada Jaamacada Carabta iyo ururka iskaashiga Islaamka oo xubin ka tahay dowlada Federaalka ah.
Warsaxafadeedkaan ayaa sidoo kale lagu sheegey in dowlada Federalka diyaar u tahay iney qayb ka qaadato xalinta khilaafkaan
Hadalka dowlada Federaalka soo saartey ayaa imaanaya xilli wadamada Sucuudiga, Imaraadka, Masar, Yamen xiriirka u jareen wadanka Qatar.
Dhinaca kale dowlada Jordan ayaa hoos u dhigtey xiriirka diplomaasi ay la leedahay dalka Qatar iyadoo sidoo kale xirtey xafiiska Al Jazeera ku leedahay magaalo madaxda dalkaas.
Madaxweynihii hore ee Somalia Xasan Shiikh ayaa xiriirka u jarey dowlada Iran kadib markii dowlada Sucuudiga xiriirka u jartey dowlada Iran.
Hoos ka akhri waraaqda ka soo baxdey Villa Somalia
Dowlada Somalia oo culeys diplomaasiyeed kaga yimid wadanka Sucuudiga
Soomaliya 10.06.2017. 00:32
MUQDISHU, Somalia - Wasiirro katirsan Xukuumadda Federaalka Somalia, oo Arbacadii gaarey magaalada Riyadh, ee dalka Sacuudiga ayaa lasoo kulmay soo dhaweyn qabow, oo aysan fileynin kuwasoo la kulmay agaasimayaal.
Wasiirada oo gaaraya Lix, ayaa waxay la kulmeen dhigooda Sacuudiga ...
Dowladda Jabuuti oo hoos u dhigtay Xiriirka Qadar
Soomaliya 07.06.2017. 18:32
​Wasiirro katirsan dowladda Somalia oo u dhoofay Sucuudiga
Soomaliya 07.06.2017. 18:11
Farmaajo oo agaasimihiisa madaxtooyada u magacaabey Fahad Yasiin [AKHRI]
Soomaliya 31.05.2017. 23:08
Muxuu salka ku hayaa muranka u dhaxeeya xildhibaan Muno Key iyo Booliska Soomaaliya?
Soomaliya 18.01.2019. 08:41
​Prof. Juriile: Dowladda Somalia ha ka noqoto mowqifkeeda khuseeya Muranka Khaliijka [Dhagayso]
Puntland 11.06.2017. 23:50
Wafdi ka socda Qadar oo yimid Muqdishu
Soomaliya 11.06.2017. 17:26
Somaliland oo taageertey wadamada xiriirka u jarey dalka Qadar
Somaliland 10.06.2017. 16:27